Wasiirka Macdanta oo Beeniyay Inuu Amray Xidhiga Weriyayaal ka tirsan Horn Cable TV | Salaan Media
Wasiirka Macdanta oo Beeniyay Inuu Amray Xidhiga Weriyayaal ka tirsan Horn Cable TV
Hargeysa (SM)-Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Biyaha Somaliland Mudane Xuseen Cali Ducaale ayaa waxba kam jiraan ku tilmaamay amarka lagu xidh xidhay weriyayaal ka hawlgala telifishanka HCTV.
Wasiirku waxaa uu sheegay in aanay waxba ka jirin eedeynta loo jeediyay iyo in aanu waxba ka ogeyn xadhigooda isaga oo tilmaamay xilliga falku dhacay in uu ku sugnaa shirka Golaha Wasiirada. Wasiirku isagoo arrintaa ka hadlaya waxa uu yidhi, “anigu arrintaasi waxaan ka dawaday uun Telifishanka Horn Cable iyadoo la igu eedaynayo in aan bixiyay amarka lagu xidhxidhay weriyayaasha. Waxaa nasiib-darro in la igu eedeeyo fal ka dhacay meel aanan marka horeba joogin.Xiligaas waxaan ku sugnaa oo aan dhex fadhiyay 24 wasiir oo waxaa aan ku jiray shirkii Golaha Wasiirada.”
“Waxaa nasiib-darro ah in TV-gaa oo meel walba laga dawaynaayo uu ummadda u tebiyo arrin aan waxba ka jirin,” ayuu yidhi wasiir Xuseen Cali Ducaale.
Dhanka kale, waxaa uu wasiirku si adag u naqdiyay xoghayaha ururka SOLJA Maxamed Rashiid Muxumed Faarax oo uu sheegay inuu ku adkeysanaayo amarkaa in uu bixiyay wasiirku. Wasiirka oo taas ka jawaabaya waxaa uu yidhi, “waxaa kale oo nasiib-darro ah in nin masuul ah, oo ah hoggaankii saxaafadda inuu u hadlo qaabkaas isagoo ka marag kacaya wax aanu hubsan ama war aan jirin oo aan xaqiiqo ahayn. Aad baan uga xumahay waana nasiib darro dhacday.” ayuu yidhi Wasiir Xuseen Cali Ducaale.
Sidoo kale, waxaa iyaguna beeniyay arrintaasi agaasimaha waaxda macdanta ee wasaaradda iyo madaxa xog ururinta ee wasaaradda Macdanta iyo Biyaga iyaga oo eedaynta loo soo jeediyay Wasiirka ku tilmaamay “waxba kama jiraana.” Waxaa ay sheegeen wasiirku in uu ka maqnaa xilliga uu dhacay falku. Waxaa ay sheegeen, “Annaggu waxaanu cadaynaynaa in wasiirku baxay intii aanu dhicin falka dhexmaray askarta ilaaladda wasaaradda iyo weriyayaasha HCTV. Waxaa kale oo ay sheegeen in weriyayaasha loo sheegay in shir lagu jiro taaoo ay qanci waayeen. Iyo inay isku dayeen inay sawirro qaadaan tasoo oo ay askartu is hortaageen.
Ugu danbeyntii, Wasiirku Macdanta iyo Biyaha waxaa uu u soo jeediyay masuuliyiinta saxaafadda gaar ahaan weriyayaasha Horn Cable TV inay ummadda u tebiyaan warar xaqiiqa ah kana fogaadaan wax kasta oo dhaaawacaya sumcadda iyo mihnadda shaqo ee ay bulshada u hayaan.